တနေ့ပြီးတနေ့ (၆) Day by Day (6) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Literature/Books » တနေ့ပြီးတနေ့ (၆) Day by Day (6)	11
တနေ့ပြီးတနေ့ (၆) Day by Day (6)
Posted by Ma Ma on Mar 8, 2015 in Literature/Books, My Dear Diary, Think Different | 11 comments
အော်ရီဒူးပြက္ခဒိန် အသစ် ၂ခု ရထားပါတယ်။
ရွာထဲကလိုချင်တဲ့သူတွေကို စူပါမားကက်ကြီးတွေမှာ ကံစမ်းမဲပေးသလို First come, First Priority လို့ပဲ ပေးရမလား မသိဘူး။ တနေ့ပြီးတနေ့ဆိုပြီး ကာတွန်းပေါ်မှာ ခံစားမိတဲ့ ကိုယ့်အတွေးအမြင်တွေဖြည့်ဖို့အတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်တာမှာ နေ့စွဲတွေပါချင်တော့ အခြားနေ့က စာတွေပါ ပါပြီး အမြင်မရှင်းဖြစ်နေရတယ်။
သို့မို့ကြောင့် ပုံတွေကို ဖြတ်ကပ်ညှပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးများရှိရင် မစ ကြပါလို့ သဂျီးခေါင်းဆောင်သော ရွာသူားအပေါင်းကို မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက် လို့ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အသေးသုံးလေးတွေ စုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ပမာဏအများကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်
ဆိုတာကို သတိပြုမိစေချင်တာပါ။ ဒီအချက်ကိုတော့ သဘူတော သဘောတူတဲ့သူ များမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီကာတွန်းကိုကြည့်ပြီး တနင်္လာ ….. အင်္ဂါ….. စနေ…. တနင်္ဂနွေ…. ဆိုပြီး စိတ်ပျက်တဲ့ပုံ၊ ပျော်နေတဲ့ပုံ ကာတွန်းပုံတွေနဲ့ တယ်လီနောက ကြော်ငြာတာကို သွားသတိရမိတယ်။
(ပြည်ပရောက်နေသူတွေတော့ နားလည်နိုင်ပါ့မလား မသိဘူး။)
နည်းပညာကြောင့် ချမ်းသာတဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့ ခေတ်ကြီးကို မောင်းနှင်ကြလို့ ဖုံးဟန်းဆက်တွေဆိုလဲ ပေါ်လိုက်တဲ့အသစ်။
ခေတ်နဲ့အညီခံစားဖို့ ပိုက်ပိုက်များများရှိဖို့ပဲ လိုတယ်။ ကြတာ အံ့မခန်းပါပဲ။
ဟိုးတုန်းက အရေး အဖတ် အတွက် ဆိုတဲ့ အသုံးလုံးကြေရင်ပဲ လူတန်းစေ့ပြီလို့ ပြောနိုင်တယ်။
ခုခေတ်မှာတော့ ခေတ်နဲ့အမီ လူတန်းစေ့အသုံးလုံးကို ကွန်ပြူတာ အင်တာနက်တွေ သုံးတတ်မှလို့ သတ်မှတ်ကြလေတယ်။
အခုလို နည်းပညာခေတ်လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ ခေတ်နဲ့အညီ စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာနေမှသာ လူတန်းစေ့တယ် ပြောရမယ်။
၂၃ ရက်နေ့ကာတွန်းမဖတ်ခင် ၂၄ရက်နေ့ကာတွန်းကို အရင်ဖတ်ဖြစ်ရင် လိပ်ပတ်လည်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ပါးစပ်ကို ပုံထဲကလိုပဲ သော့ခတ်ထားနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ တခြားတဖက်ကတွေးတော့လည်း ………….
လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ စီးပွားရေး ကြီးပွားရေးတွေလုပ်ဖို့ ဒီပါးစပ်က မဖွင့်မဖြစ် ဖွင့်ဖို့လိုသေးတယ်လေ။
အဲဒီတော့ နားစိုက်ထောင်ထားမှသာ မှားဖွင့်တတ်တဲ့ပါးစပ်ကြီး အကြိမ်ကြိမ်မှားမဖွင့်မိတော့မှာပေ့ါ။ စာထဲကလိုပဲ လူတိုင်းနေရာတိုင်းမှာ မျှဝေနိုင်ရင် လူချစ်လူခင်များပြီး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀ကို ရကြမှာပါ။
အင်းးးးး လွယ်တော့ မလွယ်လှဘူးလို့ထင်တယ်။ လောကီသားတွေမို့ နှလုံးသားကလာတဲ့ ချီးမွမ်းစကားက နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကို ဖြစ်စေမှာပါ။
ကိုယ့်သဘောနဲ့ပြောရရင်တော့ သဘောရိုးနဲ့ ချီးမွမ်းတာနဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။
ချီးမွမ်းစကားကို လူရှေ့မှာ ပြောပါ။
အပြစ်ပြောဖို့ဆိုရင် လူကွယ်ရာမှာ ပြောပါ တဲ့။ အရင်ဆုံး က်ုယ့်အစွမ်းအစကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ယုံကြည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မနက် ၃နာရီ ထနိုင်ပါ့မလားဆိုပြီး ယုံကြည်မှုမရှိတာနဲ့တင် တရားစခန်းမ၀င်ဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တယ်။
တကယ်တရားစခန်းဝင်တဲ့အခါ မနက် ၃နာရီထဖို့ မခက်ခဲတဲ့အခါကျမှ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့မိတာကို နောင်တရတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီက ၂၈ ရက်ပဲ ရှိတာအပြင် ………..
အားမှစာဖြည့်ရေးလိုက်ရတာမို့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်တင်ဖို့ အတော်လေး မြန်ဆန်လွယ်ကူလာတယ်။
နေ့တွေ ရက်တွေကို အမီလိုက်နိုင်အောင် ကြိုးစားရာက
နေ့တွေ ရက်တွေကို ကျော်လွန်လာနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငုပ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက် ဆိုသလို
တစ်နှစ်စာ ကာတွန်း ၃၆၅ ကွက်ကို တစ်နှစ်မပြည့်ခင် ပြီးအောင် တင်ပြနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုက မြင့်မားလေတော့……
တ၀က်တပျက်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားမလားလည်း မပြောနိုင်သေးဘူး။ About Ma Ma
Mr. MarGa says: ပြက္ခဒိန်​ နှစ်​ခု ထပ်​ရထားတယ်​လား
လိုချင်​လိုက်​တာ….ဒါမင့်​ ကိုယ်​က အဲ့​လောက်​မဟုတ်​ ဒါ​လေး ​မှေးဖတ်​​နေလို့ရ​သေးတယ်​
တစ်​ပုံကို အ​တွေးတစ်​ခုနဲ့ အ​တွေး​တွေ​တော့ ​တော်​​တော်​ရမိတယ်​
ပုံကို လိုသေ​လာက်ပဲ crop လို့ရတယ်​​လေ
ကွန်​ပူတာမှာဆိုရင်​ paint, picture manager အဲဒါ​တွေနဲ့ရမယ်​
ဖုန်းမှာဆိုလည်း default photo editor ​တွေမှာကို ပါပါတယ်​​ဗျ
ဦးကြောင်ကြီး says: လေရဲမိုးအမျိုး တီမားမားမှာ တူမ ၃၆၅ယောက် ရှိလျင် သိပ်ကောင်းမှာပဲစ်..
ခင်ဇော် says: ၂၅ ရက်နေ့ အတွက်ကဟာ အလွယ်ဆုံးးပါပဲ ချစ်မမ
လူတိုင်းကလည်းးး လူတိုင်းး ကိုလည်းး မျှဝေပေးးနိုင်တာပါ..
ဘာအရောင် အဆင်းးမှ မပါတဲ့ အပြုံးးတစ်ခုလောက် အနည်းးဆုံးးပေးးနိုင်ပါတယ်..
မမ မှာ ရှိပြီးးသားး မို့ပါ..
မာန်မာန မပါတဲ့ အပြုံးး မျိုးး ချစ်မမ မှာ ရှိပါတယ်
ဦးကြောင်ကြီး says: လူမိုက်ခင်ဇော်ကလဲ နုနေဗျံပီ… လေရဲမိုးအမျိုး တီမားမားတူ ခြင်ကျားပူမှာရှိဒါ သိလို့များရား..
pooch says: အကြိမ်ကြိမ်မှားဖွင့် မိသော အရာမှာ ပါးစပ်ဖြစ်သည်
မှန်လိုက်တာ ပါးစပ်သော့ခပ်လို့ ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ
Mike says: .အကြိမ်ကြိမ်မှားဖွင့် မိသော ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားလိုက်အုံးမယ်ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
၁၉ရက် – စီမန်ခန့်ခွဲမှု မှာ တာဝန် နဲ့ မပြီး ထိုက်သင့်သော ပါဝါ ပါ မပေးပါက အလုပ် မဖြစ်ပါ ကြောင်း။
၂၀ရက် – ဆွစ်ဇာလန် မှာလား မသိ။ လေးရက်ဘဲ အလုပ်လုပ် ရတယ် ဆိုတာ။
၂၃ရက် – သများ ကိုများ တည့်တည့် ပြောလေရော့သလား။
၂၄ရက် – ကိုလှဆွေ ပုံများလား။
“ချီးမွမ်းစကားကို လူရှေ့မှာ ပြောပါ။ အပြစ်ပြောဖို့ဆိုရင် လူကွယ်ရာမှာ ပြောပါ ။ ”
ကောင်းလိုက်တဲ့ စကား။ စေတနာ နဲ့ ပြောတာ သတိပေးတာ ပေမဲ့ နေရာ ဒေသ ဆိုတာ လဲ လိုသေးတာပါ။
ကျေးဇူးပါ မမ ရေ။
တစ်နှစ်လဲ ကုန် ရော။
မမ လဲ ဖိုတို့ရှော့ မှာ ဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်ရောဘဲ။ ဟန်ကျတယ်။
Alinsett@Maung Thura says: .နေရာတိုင်းမှာ
မလုပ်ချင်ပဲ လုပ်ရတာပါဆိုတဲ့ ကျောက်းသားသပိတ်ဖြိဲုခွဲမှု ခေါင်းဆောင်များ ညွှန်ကြားသူများ တော်လိုက်တာ
အဖြိုခွဲ ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ဝမ်းမြောက်လိုက်တာ
ခင်ခ says: ၃၆၅ ရက်ကို တစ်နှစ်မပြည့်မှီတင်ပေးမယ်ဆိုပါလား။
အကြံတစ်ခုပေးကြည့်မယ် နောက်လအတွက် ဒီကမှာကြိုတင်ထားရင် ကောင်းမယ်နော်။
ပုံလေးတွေဒေါင်းထားပြီး သူ့နေ့နဲ့သူ ကွန်ပျူတာမှာ နောက်ခံလေးထားရင် ဟန်ကျလေမလားပေါ့လေ။
Ma Ma says: ကြိုးစားနေပါတယ် ကိုခင်ခရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7303
etone says: စီမံ ခန့်ခွဲမှုမှာ
တာဝန်သာရှိသည် ဆိုတာလေး အရမ်းသဘောကျတယ် ။ မန်းနေ့ခ်ျ့မန့် လယ်ဗယ်ကို ယူထားသူအများစုက … တာဝန်ဆိုတာကို မေ့ပြီး အာဏာပြဖို့ချည်းလုပ်နေကြတာ ခဏခဏ မြင်ခဲ့ရတဲ့အခါ …. အရိုသေမဲ့ မဲ့လာတယ် … ။ ခိခိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.